Akụkọ - Ka anyị jide egwuregwu mbibi ahịhịa
Edepụtara plastik dịka otu n'ime ihe ndị kacha emepụta na narị afọ nke 20. Plastic dị ka mma agha ihu abụọ. Ọ bụ ezie na ọ na -ewetara anyị ntụsara ahụ, ọ na -ewetara gburugburu ebe obibi nnukwu ibu.
Iji gbochie mmetọ ọcha, mba dị iche iche ebipụtala ọtụtụ usoro n'usoro n'usoro. Na mbido 2020, China wepụtara “Echiche maka iwusiwanye ọgwụgwọ ọgwụgwọ mmetọ plastik”. Ka ọ na-erule njedebe nke 2020, ụlọ ọrụ na-ahụ maka nri n'ofe China ga-amachibido iji ahịhịa ahịhịa plastik na-anaghị emebi emebi.
Ka ọ dị ugbu a, enwere ụdị ahịhịa atọ anyị zutere n'ahịa: Ụdị PP, Ọnụ ego PLA, na ahịhịa ahịhịa.
Site n'aka ekpe: ahịhịa ahịhịa, ahịhịa PLA, ahịhịa PP
N'ihi arụrụ arụ nke ahịhịa dị iche iche, anyị haziri asọmpi mbibi ahịhịa.
Anyị kụrụ ahịhịa nke ihe atọ dị iche iche n'ime ala ka ọ dị ka mbibi compost nke ihe dị iche iche n'okpuru ọnọdụ ebumpụta ụwa wee hụ ihe mere ha ka ụbọchị 70 gachara:
Mgbe ụbọchị 70 nke mbibi compost gasịrị, eriri PP adịghị agbanwe agbanwe.
Mgbe ụbọchị 70 nke mbibi compost, ahịhịa PLA agbanweghị nke ukwuu.
Mgbe ụbọchị 70 nke mbibi compost gasịrị, o doro anya na njedebe ahịhịa ahịhịa ahụ erekasịala ma mebie ya.
Nsonaazụ egwuregwu:Mpempe akwụkwọ na -emeri asọmpi mbibi a.
Anyị na -eme ntụnyere dị mfe maka arụmọrụ gburugburu ebe obibi nke eriri atọ:
Emeghari ma ọ bụ na ọ bụghị
Mbibi nke eke
EE mana ọ siri ike
EE na mfe